Uyivula njani iAkhawunti yePayPal
I-PayPal yindlela ekhuselekileyo yokuhlawula kwi-eBay. Akukho nkonzo inokwenza umthengisi ocothayo okanye onqenayo emfanekisweni wokusebenza kakuhle. Uncedo lwePayPal, nangona kunjalo, kukuba akufuneki ungcolise izandla zakho.
Abantu base-eBay bayayazi into elungileyo xa beyibona, ke bafumana i-PayPal ngasekupheleni kuka-2002. Ngoku iintlawulo ze-PayPal zidityanisiwe kwinkqubo yokuphuma ye-eBay.
Xa ubhalisa ukusebenzisa i-PayPal, kuya kufuneka unike igama lakho, idilesi, inombolo yefowuni kunye nedilesi ye-imeyile. Kuya kufuneka uphinde wenze iphasiwedi.
Yenza iphasiwedi ibe ngaphezu kwamagama amathandathu, kwaye usebenzise amanani kwaye iileta.
ingakanani ket ukuthatha ixesha lokuqala
Kuya kufuneka ukhethe umbuzo wokhuseleko. Eyona ikhuselekileyo ligama lakho lesilwanyana sokuqala, isixeko sakho sokuzalwa, okanye iinombolo ezine zokugqibela zenombolo yakho yoKhuseleko lweNtlalo. Kuya kufuneka ucofe ukubeka uphawu lokutshekisha ecaleni komhlathi othi ufundile kwaye uyavuma isiVumelwano soMsebenzisi sePayPal kunye nomgaqo-nkqubo wabucala. Xa uqonda ukuba yeyiphi i-PayPal malunga noko ikulindeleyo kuwe, cofa ubhalise.
I-PayPal ikuthumela i-imeyile eqinisekisa ubhaliso lwakho. I-imeyile ifika, phantse kwangoko, kwidilesi ye-imeyile oyisebenzise kubhaliso, kwaye umyalezo unekhonkco. Xa ufumana i-imeyile, cofa kwikhonkco ukutyelela indawo ye-PayPal. Ngenisa igama lokugqithisa ebelisetyenziselwa ukwenza iakhawunti yakho. Ibhingo - ungenile.
Nika ikhadi lekhadi le-PayPal okanye ujonge ulwazi lweakhawunti
Ewe kunjalo, kuya kufuneka wongeze inombolo yekhadi letyala kwiakhawunti yakho ye-PayPal ukuba ufuna ukuhlawula nantoni na ngekhadi letyala (okanye ucwangcise ukuthengisa kwi-eBay). Ukuba awunalo ikhadi letyala - okanye ungathanda ukubhatalela izinto ngokuthe ngqo kwiakhawunti yakho yebhanki - kuya kufuneka ubhalise iakhawunti yakho yokutshekisha.
Oku kunokukwenza ukuba ujonge; awukhululekanga ukunika olo hlobo lolwazi nakubani na, kungasaphathwa ke ukulubeka kwi-Intanethi. Phola. I-PayPal isebenzisa itekhnoloji yokubethela amandla omkhosi ukugcina ulwazi lweakhawunti yakho lukhuselekile, ke musa ukoyika ukushiya idatha yakho.
ukutya ukutya nge-gastritis
Ukuze ubhalise ikhadi lakho letyala, kuya kufuneka ufake igama kwikhadi, umhla wokuphelelwa, kunye ne inombolo yokuqinisekisa ikhadi - inombolo enamanani amathathu ngasemva ekhadini, ebhalwe ecaleni kweenombolo zokugqibela zenani lekhadi kwindawo osayina kuyo. I-PayPal ikucela ukuba ubonelele ngedilesi yetyala.
Kwikhadi laseMelika Express, inombolo yokuqinisekisa ikhadi linani elinemivo emine kwicala lasekunene lobuso bekhadi.
Xa ufaka lonke ulwazi lwePayPal, cofa indawo yokongeza. I-PayPal ingenisa ulwazi lwakho kwinkampani yekhadi lakho letyala ukuze isiqinisekiso. Le nkqubo ingathatha umzuzu okanye kunjalo, kodwa ekugqibeleni inkampani yekhadi letyala lakho ithi unguye othi unguye, kwaye ikhadi longezwa kwiakhawunti yakho ye-PayPal. Ungabhalisa amakhadi amatyala amane asebenzayo.
Ukubhalisa iakhawunti yakho yokutshekisha kulula nje. Unikezela ngolwazi ukusuka ezantsi kwenye yeetshekhi zakho.
Ukuze iakhawunti yakho iqinisekiswe, iPayPal kufuneka ikwazi ukuqinisekisa ukuba iakhawunti yakho yebhanki yeyakho ngenene. Ukuba ugcina kwi-intanethi, unokuqinisekisa iakhawunti yakho kwimizuzu embalwa. Xa i-PayPal inolwazi oludingayo, yenza iidipozithi ezimbini ezincinci kule akhawunti. Emva kweveki okanye kunjalo, tsalela umnxeba ibhanki yakho okanye ujonge iakhawunti yakho kwi-Intanethi kwaye ufumane inani lezi zinto zimbini zidipozithi.
yeyiphi engcono i-allegra okanye i-zyrtec
Xa uneemali, sayina kwiwebhusayithi ye-PayPal kunye negama lokugqitha, kwaye uchwetheze amanani kwindawo efanelekileyo. Ewe! Iakhawunti yakho ibhalisiwe- kwaye, hayi ngokungangqinelaniyo, uyaqinisekiswa! I-PayPal iqinisekisile ukuba ubambe i-akhawunti esebenzayo kwibhanki yakho. Zonke iibhanki ziyacelwa ukuba zikhusele abanini-akhawunti, kwaye ukuqinisekiswa kungqinisise ubuni bakho kuye nakubani na oqhuba ishishini nawe.
Nazi izibonelelo zokuqinisekiswa kwePayPal:
valtrex idosi yesingxobo
Ungachitha imali efikelela kwi- $ 10,000 nge-PayPal kwintengiselwano enye.
Ufumana inqanaba eliphezulu lokhuseleko lweakhawunti.
Ubonisa umfanekiso othembekileyo njengomthengi okanye umthengisi. Ubume obuqinisekisiweyo bubonisa amanye amalungu e-PayPal ukuba uphumelele ukujonga ukhuseleko kwi-PayPal.
Ukuba awufuni ukuyeka inombolo yakho yeakhawunti yebhanki, unokuqinisekiswa ngokufaka isicelo kwaye wamkelwe kwikhadi letyala le-PayPal Plus okanye kwi-PayPal Buyer Credit.
Xa uqala ukubhalisa, kukho imida kwimali onokuyirhola kwi-PayPal, unokukwazi ukurhoxisa i-500.00 yeedola ngenyanga.
kukuvuselela iziphumo ebezingalindelekanga
Ngethamsanqa, unokulilungisa eli nqaku ngokuqinisekisa iakhawunti yakho yebhanki kunye nokudibanisa amakhadi akho etyala. Emva kokuba ugqibile amanyathelo aboniswe apha, ucacile. Umda kuphela kukuba nakuphi na ukurhoxa ukuya ebhankini akunakugqitha kwi-100,000 yeedola.
Nantsi indlela onokujonga ngayo kwaye uphakamise umda wokurhoxa:
Yiya ku-PayPal.com kwaye ungene kwiakhawunti yakho.
2, Kwisishwankathelo seAkhawunti yakho, cofa kwikhonkco elikufutshane negama lakho elifundayo Jonga imida .
Kwiphepha eliphumela, fumana ikhonkco elifundayo Phakamisa umda kwaye ucofe kuyo.
Ngoku ukulungele ukuqengqeleka nabafana abakhulu.
yintoni i-tylenol 3
zintsholongwane kusulelo lwesifo
ungathatha ixesha elingakanani ngegabapentin
lude kangakanani ukhula luphume kwinkqubo
ekunene phantsi kwentlungu